नेपालको निर्वाचनलाई लिएर भारतले समर्थन नगर्नुले कुनै अर्थ राख्दैन् : महासेठ |
नेपालको निर्वाचनलाई लिएर भारतले समर्थन नगर्नुले कुनै अर्थ राख्दैन् : महासेठ
2017/03/20 11:16:20 AM
“मधेशी मोर्चाको काँधमा बन्दुक राखेर चलाउने काम नगरियोस”
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठले तोकिएकै मिति ०७४ बैशाख ३१ गते नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तर कहीँकतै बाहिरी शक्तिको दबाबले चुनाव स्थगित् हुने त होईन भन्ने कुरा शंकाको घेराभित्र परेको उनले खतरा औंल्याए। उनले सरकारले सबै पक्षलाई मिलाएर नै चुनावमा सहभागी गराउनेतर्फ पहलकदमी लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावले नेपाल र नेपालीहरु कसैको पनि हित नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका चूनौतिहरु, मधेशी मोर्चालाई कसरी समेट्ने ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेक रिपोर्टर्स नेपाल डटकमका लागि सम्पादक रुद्र बहादुर कार्कीले महासेठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
स्थानीय तहको निर्वाचनको चूनौतिहरु के–के छन्? चुनावका खास चूनौतिहरु मैले केही पनि देखेको छैन। एउटा समस्या अहिले दुई नम्बर प्रदेशमा मधेशी मोर्चाले जो उठाएको छ, खासमा त्यो पनि चूनौति होईन। यदि राज्यले वा भनौं सरकारले चुनाव गराउन चाह्यो भने चुनाव हुन्छ। हुन त पछिल्लो समय राज्यले हिम्मत देखाएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै छ। तर एउटा कुरा के छ भने कहीँ बाहिरी दबाबले गर्दा चुनाव त स्थगित् हुने होईन भन्ने आशंका छ। यो कुरा शंकाको घेराभित्र परेको छ। त्यसकारण मैले खासै चूनौतिहरु देखेको छैन् । मधेशमा पनि खास समस्या त केही पनि छैन। भारतको काश्मिीरमा जस्तो पृथकतावादी आन्दोलन वा समस्या त मधेशमा छैन। यसर्थ राज्यले चुनाव मनशा, वचनशा र कर्मशा गराउनै चाहेको हो भने खासै समस्या वा चूनौतिहरु केही पनि छैनन्। तर चुनावको लागि सरकारले सबै पक्षलाई मिलाएर लैजानुपर्छ। यसको लागि सरकारले गम्भिर भएर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
मधेशी मोर्चा त चुनाव हुन दिन्नौं भनेर चूनौति नै दिएको छ नि ? तराई–मधेशलाई उपेक्षा गरेर चुनावमा जान सकिन्छ त?
हामी मधेशी मोर्चालाई उपेक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं । तर सवाल के छ भने मधेशी मोर्चाको हितमा सरकारले जुन संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छ, यो प्रस्ताव न नेपालको हितमा छ, न त नेपालीहरुको हितमा छ। त्यतिमात्रै नभएर यो मधेशी जनताको हितमा पनि छैन् । यो प्रस्ताव न त मधेशी मोर्चाको नै हो। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो प्रस्ताव आयातित हो। जुन प्रस्ताव अहिले हामी नेपालमा छलफल गर्दैछौं, छलफलको लागि अहिले संसदमा पेश गरिएको छ।
अब त्यो प्रस्ताव भारतमा पनि छलफल हुन्छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि कुरा के रहेछ भनेर ? छलफलको लागि एउटै ठाउँ भनेको नै व्यवस्थापिका–संसद हो। संसद बाहिर देश विदेशमा कतैपनि छलफल गर्न जरुरी थिएन्। तर आज नेपाली राजनेताहरु, मन्त्रीहरु, बुद्धिजीवीहरु विदेशमा गएर विदेशी मन्त्री तथा नेताहरुसँग जुन प्रकारले नेपालको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी छलफल गरिरहनुभएको छ, यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितमा राम्रो देखिएको छैन्। त्यसकारणले हामी के चाहन्छौं भने मधेशी मोर्चालाईपनि समेट्ने, यो चार वटा संशोधन विद्येयकमा समेटिएका विषयमध्ये कुन–कुन विषयमा सहमतिमा ल्याउन सक्छौं भन्नेबारेमा बसेर हामीले छलफल गर्न सक्छौं। तर जस्ताको तस्तै प्रस्ताव पारित गर्न भने हामी सक्दैनौं।
संविधान संशोधनमा समेटिएका चार वटा विषयमध्ये सिमांकनबाहेक अरु विषयलाई पारित गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, एमालेले यो विषयमा सहमति जनाएको हो र ? त्यस्तो होईन। जस्तो संविधान संशोधनका चार वटा विषयहरु भाषा, नागरिकता, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सिमांकन हेरफेर छ। जस्तो भाषाकै कुरा गरौं, नेपाली भाषाबाहेक कामकाजी भाषाको रुपमा दुई वटा मातृभाषा बनाईनेछ भनेर लेखिएको छ भने भाषामा पनि हाम्रो विमति छैन। त्यस्तै नागरिकताको हकमा अंगीकृत नागरिकताको सवालमा उहाँहरुले जे माँग गर्नुभएको छ। त्यसमाथि मधेशी मोर्चाका साथीहरुलेपनि विचार गर्नुपर्छ। यो विषयमा जस्तातस्तै पारित गर्ने कुरामा नेकपा एमाले सहमत हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन्। तर यसमा हामी शर्तसहित कुराकानी गर्न भने सक्छौं ।
मधेशी मोर्चाले त एमालेले चुनाव चाहेको छैन भनेर आरोप समेत लगायो ? चुनाव भाँड्नको लागि मेची काली अभियान सञ्चालन गरेको भन्ने समेतका आरोपहरु छन नि ?
हाम्रो मेची महाकाली अभियान चुनावकै लागि भनेर होईन। यो चाहीँ ७ महिना पहिले नै घोषणा गरेको अभियान हो। यो अभियान घोषणा गर्दाखेरि नै हामीले बडो प्रष्ट रुपमा भनेका थियौं। संविधान कार्यान्यवयन, निर्वाचन, राष्ट्रियताको रक्षा र स्वाभिमानको रक्षाको लागि यो अभियान चलाएका हौं। एकताको सन्देश दिनको लागि हामीले यो अभियान चलाएका छौं। हम्रो संविधानलाई लिएर जुन देशी तथा विदेशी शक्तिहरुले प्रतिक्रिया जनाएका छन्, त्यो कुरा जनतालाई बुझाउनको लागि हामीले अभियान चलाएका हौं ।
बास्तवमा हाम्रो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो। यसमा कुनै कमीकमजोरी छैन। हाम्रो देशको जस्तो संविधान छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा पनि छैन। हाम्रो संविधानमा हामीले महिलालाई अधिकारको सुनिश्चितता गरेका छौं। ३३ प्रतिशत त हामीले व्यवस्थापिका संसददेखि लिएर पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि दिई नै राखेका छौं। जब की यस्तो अधिकार संसारमा कहीँ पनि दिएको छैन्। त्यस्तै स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत महिला उम्मेद्धवार हुनैपर्छ भनेर सुनिश्चितता गरेका छौं। यो पनि संसारमा कहीँ पनि छैन। अहिले विश्वमा धेरै देशहरु छन्, जहाँ महिलालाई भोट हाल्ने अधिकार दिईएको छैन। तर हाम्रो देशको कुरा गर्नुुहुन्छ भने नेपालमा अहिले न्यायापालिकाको प्रमुख महिला नै हुनुहुन्छ, व्यवस्थापिकाको प्रमुख महिला नै हुनुहुन्छ र राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति पनि महिला नै हुनुुहुन्छ ।
अनि यतिको उत्कृष्ट संविधान हुँदा हुँदै जुन प्रकारले प्रोपोगाण्डा गरिएको छ। उधुम मच्चयाईएको छ। त्यो कुरा बुझाउनको लागि हामी यो अभियानमार्फत जनताका घरदैलोमा गैरहेका छौं । त्यसैगरि हाम्रो राष्ट्रियताको सवालमा विदेशी प्रहरी हाम्रो सिमाभित्र पसेर हाम्रा नेपाली दाजुभाई तथा दिदि बहीनीहरुलाई हत्या गरेको छ, अभद्र व्यवहार गरेको छ। त्यो नहोस्। त्यस्तै हामी नेपालीहरुकाबीमा सयौं वर्षदेखि सामाजिक सद्भाव कायम रहेको छ। त्यो पनि नटुटोस्। यो सन्देश दिनको लागि हामीले यो अभियान सञ्चालन गरेका थियौं । हिजो हाम्रो अभियान सकियो। अब हामी उपर्युक्त समयमा चार दिनको कार्यक्रम अब दुई नम्बर प्रदेशमा राख्छौं। दुई नम्बर प्रदेशमा पनि हामी कार्यक्रमहरु गर्छौं नै ।
संविधान कार्यान्यवन र विकासमा निर्वाचनले कस्तो प्रभाव पार्छ ? निर्वाचन नहुँदा विकासका कामहरु रोकिएका जनगुनासाहरु पनि छन् नि ?
निर्वाचन नहुँदा विकासमा अलिकति अप्ठ्यारो चाहीँ पर्छ। निर्वाचन नभएकै कारण अहिले सबै स्थानीय निकायहरु खाली छन्। स्थानीय तह हामीले कर्मचारी तन्त्रबाट चलाएका छौं। जुन कुरा आँफैमा उपर्युक्त छैन्। कर्मचारीतन्त्रबाटै चलाउने हो भने हामीलाई प्रजातन्त्र किन चाहिएको थियो र ? यसकारण निर्वाचन हुन जरुरी छ। तर निर्वाचन नभएकै कारण सम्पूर्ण विकासका कामहरु नै ठप्प हुन्छन् भन्ने कुरा सत्य होईन। निर्वाचन भएपछि जुन पार्टीको बहुमत आउँछ, चाहे त्यो स्थानीय निकायमा होस् वा चाहे त्यो प्रदेश सभामा नै किन नहोस् ? चाहे केन्द्रमा नै किन नहोस्, यस्तो भयो भने मान्छेमा निर्धक्कता आउँछ। ५ वर्षको लागि ढुक्क हुन्छ। अहिले त सबै कुराहरु सहमतिकै आधारमा चलेका छन्। सहमतिकै आधारमा विकास बजेटहरु ब्रम्हलुट भएका छन्। यी कुराहरु रोक्नको लागि निर्वाचन जरुरी छ।
मधेशी मोर्चाले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन स्थगत् गरेर केन्द्रिय संसदको निर्वाचन गरौं भनेर माँग गरिरहेको छ, के यो संभव छ ?
त्यो गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा होईन। सकिन्छ। उसो भए हामी किन तीन तहकै निर्वाचनमा नजाने त ? हुन त भारतको पनि त्यही सुझाव छ, जुन मधेशी मोर्चाको छ। पहिले संसदको चुनाव गर्ने । स्थानीय तहको निर्वाचन नै पहिले हुँदा आखिर के चाहीँ बिग्रिन्छ र ? आखिर जनताले भोट दिने हो। यसमा यो पहिले वा त्यो पहिले भनेर छुट्याउनु नै गलत हो। मधेशी मोर्चा निर्वाचनमा जान डराईरहेको छ, किनकी उहाँहरुले मधेशमा जनसमर्थन नै गुमाईसक्नुभउको छ।
पहिलो संविधानसभामा उहाँहरुलाई मधेशी जनताले जुन प्रकारले उत्साहवद्र्धक रुपमा जिताएर पठाउनुभयो, पछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा एकैचोटी ब्रेक लगाउनुभएको छ। अब हुन सक्छ तेस्रो निर्वाचनमा उहाँहरुलाई जनताले त्यो भन्दापनि खराब समर्थन दिनुहुन्छ कि भन्ने डरले उहाँहरु हतपत स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानबाट डराउनुभएको छ। तर पनि जुन चुनावमा गएपनि चुनाव हुनुपर्यो। अब मलाई लाग्छ, चुनावको विकल्प छैन। अर्बौ रुपैयाँ निर्वाचन आयोगमार्फत खर्च भैसक्यो ।
अब निर्वाचन सारिन्छजस्तो मलाई लाग्दैन् । बरु दुई चरण वा तीन चरणमा हुन्छ कि त्यो गरौं । एक चोटी हिमाल र पहाडमा गरौं, एकचोटी दुई नम्बर प्रदेशबाहेक गरौं वा तेस्रो पटक दुई नम्बर प्रदेशमा गरौं । हालाकी चुनाव हुन दिन्नौं भनेर दोस्रो संविधानसभाको चुनाव हुन दिन्नौं भनेर पहिलेपनि भनिएको थियो नि। तर चुनाव भयो नि ।
बैशाख ३१ गते नै स्थानीय तहको निर्वाचन भएन भने के हुन्छ ? मुलुकको राजनीति कतातिर जाला ?
अब भएन भने अलि संविधान संटकमा पर्न सक्छ। ०७४ माघ ७ गतेभित्रै तीन तहकै निर्वाचन गर्नुपर्छ । समयभित्रै निर्वाचन भएन भने संविधान क्रियाशिल हुन गाह«ो छ। हुन त देशी तथा विदेशी शक्तिहरु यो संविधानको हितमा नभएकोले संविधान कार्यान्वयन नहोस् भनेर कुनैपनि हालतमा यो चुनाव नहोस् भनेर लागिपरिरहेका छन्। त्यसकारणले यी शक्तिहरुलाई परास्त गरेर अघि बढ्नुपर्छ। सरकारले यसमा गम्भिर भएर कदम चाल्नुपर्छ। सरकारले दृढ भएर तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउनुपर्छ। यदी तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन सकेन भने सरकारमा बस्ने दलहरुलाई जनताले भोलिका दिनमा कहाँ पुर्याउँछन भन्ने कुरा त्यो भविष्यले नै देखाउँछ।
नेपालको निर्वाचनलाई लिएर छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया पनि दिएको छैन, यसबारेमा यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
हामीलाई नेपालमा चुनाव गराउनको लागि कुनै विदेशी राष्ट्रको समर्थन वा प्रतिक्रिया चाहिँदैन्। हाम्रो भाग्य निर्माण हामी नेपाली आँफैले गर्ने हो । हाम्रो देश न भारत आएर बनाउँछ, न त अमेरिका आएर बनाउँछ, न रसिया आएर बनाउँछ न त चाईना आएर बनाउँछ। हम्रो देश हामी आँफैले बनाउने हो। तपाई हामीले मिलेर बनाउने हो।
हो, सहयोग हामी लिन सक्छौं। सहयोग हामी माँग्न सक्छौं। तर यदि कुनै जस्तो यही चुनावको सन्दर्भ जो छ, यसमा पनि हामीलाई कुनै विदेशी शक्तिले दबाब दिन्छ भने हामी त्यसलाई मान्दापनि मान्दैनौं। त्यसकारण हाम्रो निर्वाचनबारे भारतले प्रतिक्रिया दियो कि दिएन, चाईनाले प्रतिक्रिया दियो कि दिएन भन्ने कुराको कुनै महत्व छैन। यो कुनै जरुरीको कुरा होईन। नेपाल सरकारले चुनाव गराउने हो, नेपाली जनताले भोट हाल्ने हो। र, आफ्नो भाग्यको निर्माण आँफै गर्ने हो ।
उसो भए भारतले निर्वाचनलाई लिएर समर्थन गर्यो वा गरेन भनेर कुनै अर्थ राख्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, यसले कुनै अर्थ राख्दैन् । नेपाली जनताले आफ्नो भाग्यको फैसला आँफैले गर्ने हो।
नेपाल–भारत सम्बन्धकै कुरा गर्दा द्धिपक्षीय संभावनाहरु के–के छन् ?
नेपाल र भारतवीचको सम्बन्ध हामी पञ्चशीलको आधारमा तय गर्छौं। सुरुदेखि नै हामीवीचको सम्बन्धमा हामीले भारतीय जनतालाई जति माया गर्छौं, भारतीय जनताले पनि हामीलाई त्यतिकै माया गर्छन्। भारत पनि स्वतन्त्र राष्ट्र हो। नेपाल पनि स्वतन्त्र राष्ट्र हो। दुवै देशको स्टाटस सम्मान छ। त्यसैले भारतले हामीलाई एउटा छिमेकीको जस्तो व्यवहार गरोस्। तर विगत केही वर्षदेखि जुन हामीले भारतको व्यवहार देखेका छौं, त्यो राम्रो छैन। जस्तो भारतले एकतर्फी रुपमा नाकाबन्दी गर्नु, यो आँफैमा अन्र्तराष्ट्रिय कानूनको विपरित हो। अन्र्तराष्ट्रिय मान्यताको विपरित हो ।
भारतले हामी सानो देशलाई नाकाबन्दी किन लगाउनुपर्यो ? भारतले के बुझ्नुपर्छ भने हामी भारतको राज्य होईनौं। भारत सरह नै स्वतन्त्र देश हौं। हामीले जसरी भारतलाई सम्मान गरेका छौं, त्यसैगरि भारतलेपनि हामीलाई सम्मान गर्नुपर्छ। यही एकले अर्कोलाई गर्ने सम्मानका आधारमा चाहीँ द्धिपक्षीय सम्बन्ध जोडिन्छ। भारतलाई नेपालको ७०/८० हजार हेक्टर जमिन किन मिच्नुपर्यो ? यो बारेमा मैले कुरा बुझेको छैन ? यत्रो ठूलो देश छ । हालै पशुपतिनगरमा उसले गुम्बा बनाउँदैछ। यो एकदमै गलत कुरा हो। हामी चाहन्छौं नेपालमा भारतविरोधी गतिविधि हुन दिँदैनौं। आतंकवादी गतिविधिहरु हामी हुन दिँदैनौं। कुनैपनि किसिमको आतंकवादी गतिविधिको लागि नेपाली भुमी हामी प्रयोग गर्न दिँदैनौं। हम्रा विरोधमा यदि भारतमा विरोध हुन्छ भने भारतले त्यसलाईपनि हुन दिनुभएन्। त्यसैले हामीवीचको द्धिपक्षीय सम्बन्धको प्रमुख आधार र संभावना भनेको नै विश्वास हो। आपसी समझदारी हो। एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने हो। कसी हो। त्यसैले हामी सबैले यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ।
द्धिपक्षीय सम्बन्धका आगामी चूनौतिहरु चाहीँ के–के देख्नुभएको छ ?
जहाँसम्म चूनौतिका कुराहरु छन्। एउटा त भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरिदियोस् । चाहे त्यो चुनाव सम्बन्धी होस, वा विकास सम्बन्धी होस्। नेपाली नेताहरुलाई क्लास दिने काम तत्काल बन्द गरियोस्। चाहे त्यो बिहारमा होस, चाहे त्यो युपीमा होस्, यस्ता क्लास दिने कामहरु बन्द गरियोस्। र, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हामीलाई सम्मान गरियोस्। अहिले नेपालमा मधेशी मोर्चाले जुन किसिमले माँग गरिरहेको छ, यो चुनौति पनि भारतबाटै सिर्जना गरिएको हो।
भारतीय एक चर्चित मन्त्रीले सार्वजनिक भाषणमै नेपालको संविधान नेपालको आन्तरिक कुरा होइन भनेर भनेको हामीले मिडियामार्फत थाहा पायौं। यो कुरा हामीसँग रेकर्ड छ। म यी भारतीय नेताजीलाई भन्न चाहन्छु, कि तपाई गलत बोल्दै हुनुहुन्छ । यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो। तपाईहरु यस्ता बकवास कुराहरु नगर्नुहोस्। भारतको संविधान कस्तो हुने हो भनेर हामी नेपाली भन्न गएका छैनौं। उहाँहरुले हामीसँग राय पनि लिनुभएको छैन्। हामीले विदेशीसँग किन राय लिने ? हाम्रो संविधानलाई लिएर उनीहरुले टिकाटिप्पणी किन गर्ने ? मधेशी मोर्चाको काँधमा बन्दुक राखेर चलाउने काम चाहीँ नगरियोस्।
नेपाल–चीन सम्बन्धका सम्भावनाहरु चाहीँ के–के देख्नुभएको छ ?
भारतसँगको सम्बन्ध हाम्रो चाईनासँगपनि होस्। र, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारले जुन सन्धि सम्झौताहरु गरेको थियो, त्यो नेपालको उज्ववल भविष्यको लागि दिर्घकालिन महत्व राख्ने राम्रो छ। चाईनाले पनि यी सम्झौताहरुलाई लागु गर्नुपर्छ। त्यसैगरि नेपालले पनि यी कुराहरुलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। हामी चाहन्छौं कि नेपाललाई भारतबाट जति माया भैरहेको छ, चाईनाबाट पनि उतिकै माया पाउँ । उतिकै माया जापान, रसिया, अमेरिकाबाट पाउँ । विदेशी लगानी होस्। भित्रियोस् ।
जस्तो केपी ओलीकै पालामा नेपालमा २ सय विलियन बराबरको युरोनियम खानी फेला परेको छ । करिब २ सय बिलियनभन्दा बढिको एमाउन्टमा पेट्रोलहरु फेला परेको छ। हामीले स्रोत र साधनहरुलाई भरपुर उपयोग गर्ने हो भने स्वभाविक छ हाम्रो देश १० वर्षभित्रै कहाँबाट कहाँ पुग्छ ? त्यो चीज पुरा गराउनको लागि हामी चीनको सहयोगको लागि पनि माँग गर्छौं। भारतको पनि सहयोगको माँग गर्छौं। हामी अमेरिकाको पनि सहयोगको माँग गर्छौं ।
तर विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि त राजनीतिक स्थायित्व त जरुरी छ नि ? नेपाल स्थायत्वि कहिले हुने हो ?
चुनाव सम्पन्न भएपछि राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ। ह्ुन त हामी पार्टीहरुले यसमा बुद्धि पुर्याउन सकेनौं। निर्वाचन प्रणालीमा हामीले समानुपातिक जुन व्यवस्था गरिएको छ। यसले यो देशमा कुनैपनि पार्टीलाई बहुमतमा आउन दिँदैन् । त्यसैले म त अझै पनि भन्छु कि संविधान संशोधन गर्ने हो भने एउटा निर्वाचन प्रणाली पनि ल्याउँ । समानुपातिकबाट आउनु हुने सांसदहरुलाई राज्यसभामा राखौं, वा छुट्टै ठाउँमा राखौं, प्रतिनिधि सभाजस्तो अधिकार र कर्तव्य जस्ताको तस्तै नदिंऔं। यो सबै देशमा छ। हामी चाहन्छौं, यो निर्वाचनपछि जसले प्राप्त गरेपनि एउटा पार्टीले बहुमत प्राप्त गरोस् ।
जुनसुकै पार्टीले बहुमत प्राप्त गरोस्। यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । चाहे काँग्रेसले नै किन नगरोस्, वा हाम्रो पार्टीले वा नेकपा माओवादी केन्द्रले । अरुको यहाँ हुत्ती छैन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरुलाई नै जनताले मत दिने हो नि। त्यसैले म सम्पूर्ण जनताहरुसँग पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईहरुले मत दिँदा कुनै एउटा पार्टीलाई बहमुत दिनोस् । ताकी मुलुकमा स्थायित्व छाओस् । सक्नुहुन्छ भने एमालेलाई बहुमत दिनोस्। सक्नुहुन्न भने अरु पार्टीलाई दिनोस् । तर एउटा पार्टीलाई बहुमतमा पुर्याउनुहोस् ।
चुनाव तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्नको लागि प्रमुख दल काँग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको सहमतिको सरकार गठन हुने आधारहरु छैन?
चुनावको लागि सहमतिको सरकार बन्यो भने धेरै राम्रो । यसमा मधेशी मोर्चालाईपनि सहमतिमा ल्याउनुपर्छ । कम्तिमा प्रमुख दलहरुको सहभागितामा राष्ट्रिय सरकार गठन भए धेरै राम्रो सकिन्छ भने मधेशी मोर्चालाईपनि सरकारमा लिएर चुनावमा जाँदा धेरै राम्रो हुन्छ।